Izindlu e- Intiyaco gran vista, rio
Calamuchita, Córdoba, i-Argentina
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Dolores
I-Intiyaco: Indlu yezwe enombono ongajwayelekile wezintaba ezinkulu, elungele ukunqanyulwa kubuchwepheshe. Igumbi elilodwa, amafasitela amakhulu, amahektha ayisithupha omhlaba onehlathi, ukwehlela ngasese emfuleni i-Los Reartes. Umbhede olala abantu ababili kanye nemibhede emibili yabantu abangabodwana, intulo, indawo yokudlela yasekhishini ehlome ngokuphelele, izoso, ihhavini yezinto ezibonakalayo, igalari enkulu, ugesi, amanzi ashisayo
Ukuze ufike lapho usuka e-Villa General Belgrano kufanele wenze cishe amakhilomitha ayi-10 ngomgwaqo oya e-La Cumbrecita (umzila 109), udlule e-Atos Pampa futhi uwele umfula i-Los Reartes. Indlu ingamakhilomitha amabili ukusuka ebhulohweni eliwela umfula, kwesokunxele.
Ungafika lapho ngebhasi kodwa kungcono uhambe ngemoto yakho (noma iyiphi imoto ingangena ngaphandle kwezinkinga). Ayikho i-wifi futhi isignali yeselula endlini iyashintshashintsha. Noma yimuphi umakhalekhukhwini usebenza kahle kusukela esangweni lokungena. I-Villa General Belgrano ingamakhilomitha angama-27, iVilla Berna i-5 km, iLa Cumbrecita 10 km.
Ngizobe ngikhona ukuze ngiwamukele, isikhathi esisele kunoma yikuphi ukuphazamiseka uzobe ekhona omunye umuntu ohlala eduze, ngokufanayo ukuthola okhiye lapho ehamba.